Bortezomib ntụ ntụ (179324-69-7) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Bortezomib ntụ ntụ (179324-69-7)
Rating: SKU: 179324-69-7. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Bortezomib powder (179324-69-7), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Bortezomib bụ ọgwụ na-egbochi kansa cancer na onye na-egbochi ọgwụ na-agwọ ọrịa nke mbụ iji mee ihe n'ime ụmụ mmadụ. Ndị na-egbochi nchebe bụ ogige cellular nke na-akụda ndị na-edozi. N'ọrịa ụfọdụ, ndị na-edozi ahụ na-egbukarị mkpụrụ ndụ cancer nwere ngwa ngwa. Bortezomib na-egbochi usoro a ma hapụ ndị ahụ na-edozi ahụ na-egbu mkpụrụ ndụ cancer. A nabatara ya na United States na Europe maka ịgwọ nlọghachi na otutu myeloma na mantle cell lymphoma. Na otutu myeloma, a na-enweta azịza zuru oke nke ndị na-arịa ọrịa na ọrịa ndị ọzọ ma ọ bụ na-arịwanye elu ngwa ngwa.
Bortezomib ntụ ntụ video
Bortezomib ntụ ntụ isi agwa
aha: Bortezomib ntụ ntụ
Usoro Molecular: C19H25BN4O4
Molekụla arọ: 384.24
Bortezomib azu na ojiji
Bortezomib ntụ ntụ Usage
Bortezomib ntụ ntụ bụ ọgwụ mgbochi cancer na onye mbụ na-egbochi ọgwụ na-echebe proteasome iji mee ihe n'ime ụmụ mmadụ. Ndị na-egbochi nchebe bụ ogige cellular nke na-akụda ndị na-edozi. N'ọrịa ụfọdụ, ndị na-edozi ahụ na-egbukarị mkpụrụ ndụ cancer nwere ngwa ngwa. Bortezomib ntụ ntụ kwụsịrị usoro a ma hapụ ndị ahụ na-edozi ahụ na-egbu mkpụrụ ndụ cancer. A nabatara ya na United States na Europe maka ịgwọ nlọghachi na otutu myeloma na mantle cell lymphoma. Na otutu myeloma, a na-enweta azịza zuru oke nke ndị na-arịa ọrịa na ọrịa ndị ọzọ ma ọ bụ na-arịwanye elu ngwa ngwa.
Oghere boron nke dị na Bortezomib raw ntụ ntụ na-ejikọta ebe ọkpụkpọ nke 26S proteasome nke nwere oke ịdị mma na ihe dị iche. N'ime mkpụrụ ndụ nkịtị, proteasome na-achịkwa okwu protein ma na-arụ ọrụ site na mbibi nke protein, ọ na-ehichakwa mkpụrụ ndụ nke ndị na-edozi ahụ. Ihe gbasara ọgwụ na ọgwụ na-akwado ọrụ dị na ntanetịpụ mkpụrụ ndụ myeloma, na cell-culture na data xenograft na-akwado ọrụ yiri ya na ọrịa cancer. Ọ bụ ezie na ọtụtụ usoro yiri ka ọ ga-emetụta, nkwụsị nke nchedo nwere ike igbochi ịla n'iyi nke ihe ndị na-emepụta ihe, na-ebute ọnyá cell na-emepụta na mkpụrụ ndụ na-adịghị mma. N'oge na-adịbeghị anya, a chọpụtara na Bortezomib ntụ ntụ kpatara mgbanwe dị ngwa ma dị egwu na ọkwa nke peptides intracellular nke nchebe ahụ na-emepụta.  E gosipụtara ụfọdụ peptides intracellular ka ha na-arụsi ọrụ ike, ya mere mmetụta nke Bortezomib raw ntụ ntụ ogo nke peptides intracellular nwere ike itinye aka na ọgwụ na / ma ọ bụ mmetụta nke ọgwụ.
Bortezomib ntụ ntụ jikọtara ya na ọrịa neuropathy na 30% nke ndị ọrịa; mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịgbu mgbu. Nke a nwere ike ịka njọ karịa ndị ọrịa na-adịghị ahụ anya. Tụkwasị na nke ahụ, myelosuppression na-eme ka neutropenia na thrombocytopenia pụkwara ime ma bụrụ oke-oke. Otú ọ dị, mmetụta ndị a na-abụkarị ihe dị nro dịka ụbụrụ nke ụbụrụ na usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ maka ndị ọrịa nwere ọrịa. Bortezomib raw ntụ ntụ jikọtara ọnụ ọgụgụ dị elu nke shingles, ọ bụ ezie na prophylactic acyclovir nwere ike ibelata ihe ize ndụ nke a. Akwukwo nso nke etiti Nephritis.
Ọrịa na-egbuke egbuke (GI) na asthenia bụ ihe ndị kachasị njọ.
E gosipụtara mmetụta ndị na-akpata anticancer nke Bortezomib raw powder dị ka otu onye na-egosi ụdị meteloma dị iche iche, bụ T-cell leukemia, ọkụ, ara, prostate, pancreatic, isi na n'olu, na ọrịa cancer colon, na melanoma. Ogwu Bortezomib Oral Bred 1.0 mg / kg kwa ụbọchị maka ụbọchị 18 na-eme ka ụbụrụ na-eto eto tumadi, nakwa dịka ọnụ ọgụgụ nke metastases dị na ụdị ọrịa kansa cancer Lewis. Bortezomib uzuzu na otu ihe ruru 5 mg / kg budata belata mkpụrụ ndụ dị ndụ nke ụbụrụ ara ara. Bortezomib uzuzu 1.0 mg / kg na-achịkwa kwa izu maka izu 4 na-ebelata nsị tumo site na 60% na ụdị ọnụọgụ abụọ nke ọrịa cancer prostate. 1.0 mg / kg Bortezomib izu ntụ ntụ ntụ maka izu 4 na-apụta na 72% ma ọ bụ 84% belata ọrịa cancer cancer pancreatic xenografts, nakwa dị ka mmụba na apoptosis tumor. 1.0 mg / kg Bortezomib na-emepụta ọgwụgwọ na-emepụta ihe dị njọ nke nsị mmadụ na-arịwanye elu, na-arịwanye elu na mkpụrụ ndụ mkpọnkpo tumọ na mkpokọta ndụ, na ọnụ ọgụgụ nke ọrịa angiogenesis.
Ịdọ aka ná ntị na Bortezomib raw ntụ ntụ
Icheta ụzọ ụzọ ubiquitin-proteasome siri pụta dị ka ụzọ dị mma maka ịgwọ ọrịa cancer mmadụ. Dabere na nchọpụta ziri ezi na nlekọta ahụike, Bortezomib raw powder bụ nke a kwadoro maka ọgwụgwọ dịka usoro ọgwụgwọ nke mbụ maka ndị ọrịa ọhụrụ myeloma na-agwọ ọrịa na maka ọgwụgwọ nlọghachite / refractory multiple myeloma na mantle cell lymphoma, n'ihi na nke a ọgwụ nwere ghọọ ihe nlekọta nke ọgwụgwọ. Nkwado nke Bortezomib ntụ nke US Food and Drug Administration (FDA) kwadoro dị ịrịba ama dị mkpa dị ka onye na-eme ihe nchebe mbụ na-eme ka a rụọ ọrụ na ịgwọ ọrịa ọjọọ. Bortezomib raw powder egosiputa uru bara uru ma ọ bụ dịka akụkụ nke ọgwụgwọ na-eme ka chemo / / redio sensiti ma ọ bụ merie mmeri ọgwụ. Otu n'ime ihe ndị bụ isi nke Bortezomib ntụ ntụ nke metụtara ọrụ anticancer bụ site na nchịkọta nke NOXA, nke bụ proapoptotic protein, na NOXA nwere ike soro ndị na-echebe antopototic protein nke Bcl-2 subfamily Bcl-XL na Bcl-2, ma rụpụta na mkpụrụ ndụ apoptotic na mkpụrụ ndụ ọjọọ. Usoro ọzọ dị mkpa nke Bortezomib raw powder bụ site na mmechi nke ụzọ NF-κB nke na-ebute usoro iwu nke mkpụrụ ndụ ihe omimi nke apoptotic. Ọ bụ ezie na ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ịga nke ọma na Bortezomib ntụ ntụ nọ na-emetụta ọrịa ọjọọ, mmetụta ọ na-enwe banyere eriri afọ siri ike abụghị ihe agbamume. Tụkwasị na nke ahụ, ọkpụkpụ Bortezomib zuru oke na-aga n'ihu na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ka ọ ghara ịdaba, na-eguzogide ọgwụ na nnyonye anya site na ụfọdụ ogige ndị sitere n'okike. Nchọpụta ndị a nwere ike inyere ndị nduzi ọgwụ aka ka ha na-eji nlezianya mee ihe nke Bortezomib raw ntụ ntụ, ma gbaa ndị ọkà mmụta sayensị bụ isi ume ịmepụta ndị na-egbochi ndị na-echebe proteasome ndị ọzọ nke na-eme ka ọrụ dị irè ma mepụta nzaghachi na-adịgide adịgide na ọrịa cancer. Ngwa ndị ọzọ a na-achọsi ike maka ndị na-emepụta proteasome na-agụnye mmepe nke ndị na-emechi ihe megidere ihe mgbagwoju anya E3, nke na-eme n'oge nzọụkwụ n'ụzọ ubiquitin-proteasome, na nchọta nke ndị na-adịghị egbu egbu na akwụkwọ ndị na-egbochi ndị na-echebe protein sitere na ngwaahịa na ọgwụ ndị a na- nwere ike inye ndị na-achọ ọgwụ maka ọgwụ cancer na ọgwụgwọ nke ndị ọrịa cancer n'ọdịnihu.
Bortezomib uzuzu bụ ọgwụ nke na-egbochi onye nchekwa 26S nke anụ ahụ. Ụzọ uzo ubi na-ekere òkè dị mkpa n'ịchịkwa nkwonkwo intracellular nke ndị na-edozi protein, si otú a na-enwe ebe obibi n'ime mkpụrụ ndụ. Mgbochi nke proteasome 26S gbochie nke a na-echebe proteinolysis, nke nwere ike imetụta ọtụtụ cascades na-egosi na cell. Mgbochi a nke usoro nke homeostatic nwere ike ibute ọnwụ ọnwụ. Ahụmahụ egosila na Bortezomib raw ntụ ntụ bụ cytotoxic ka ọtụtụ ụdị cancer cell in vitro. Bortezomib raw ntụ ntụ na-akpata oge na tumo ibu na vivo na nonclinical tumo ụdị, gụnyere otutu myeloma. Mkpịsị Tumo, ya bụ, na-agba ọsọ ngwa ngwa na-ekewa mkpụrụ ndụ, yiri ka ọ ga-adọrọ mmasị na nkwụsị nchedo.
Bortezomib ntụ ntụ bụ onye na-emegharị mgbanwe nke ọrụ chymotrypsin-dị ka ọrụ nke proteasome 26S na mkpụrụ ndụ mammal. Ngwadogwu 26S bụ protein dị ukwuu nke na-eweda ndị na-edozi ahụ. Ebe na-arụ ọrụ nke proteasome nwere chymotrypsin-dị ka, trypsin-dịka, na postglutamyl peptide hydrolysis ọrụ. Ngwadogwu 26S na-eme ka ndị dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị njọ maka ndụ ndụ cancer, dị ka cyclins, ndị na-egbochi ọrịa tumadi, BCL-2, na ndị na-egbochi cyclin-inhibitors. Mgbochi nke mmebi iwu ndị a na-achọpụta mkpụrụ ndụ ka apoptosis. Bortezomib raw powder bụ onye nwere ike igbochi 26S proteasome, nke na-achọpụta ọrụ na nkerisi ọtụtụ myeloma na leukemic sel, si otú a inducing apoptosis. Tụkwasị na nke ahụ, Bortezomib ntụ ntụ na-egosi ka ụbụrụ cancer na-eme ka ndị agadi na-agwọ ọrịa anticancer (dịka, gemcitabine, cisplatin, paclitaxel, irinotecan, na radieshon).
Bortezomib Kacha ntụ ntụ
Raw Bortezomib ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Bortezomib ntụ ntụ si AASraw